အာရှသားရဲ့နည်းပညာ: USB Specifications
USB (Universal Serial Bus) က External Device တွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထား တာပါ။သူ့မှာ အားသာချက်က USB Devices ကို Windows Run နေတဲ့အချိန်မှာ တပ်ဆင်တဲ့အချိန် System ကို Restart လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ length အရ ဆိုရင် Default အရ 5m (30ft) အရှည်ဆုံးရှိပါတယ်။ ဒီထက်ရှည်မယ်ဆိုရင် Data Transfer လုပ်တဲ့ အခါ Lostဖြစ်တတ်ပါတယ်။USB မှာ Version 4မျိုးရှိပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်က စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Version 1.0 မှာ 1.5Mbps Data Transfer Rate ရှိပါတယ်။ Hight Speed လိုအပ်တဲ့ Drive တွေကိုဆိုရင် 12Mbps ထိ support လုပ်ပေးပါတယ်။ Bandwidth သေးငယ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ 1.5 Mbps ပဲ support လုပ်ပါတယ်။
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Data Transfer Rate က Hight-speed ဖြစ်ပါတယ်။ Versio1.0 ထက်စာရင် Data Transfer Rate က အရမ်းများပါတယ်။ 480Mbps လောက်ထိရှိပါ တယ်။
၂၀၁၀ နှစ်ဦးပိုင်းမှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ SATA နှင့် ESATA တို့ထက်တောင် ပိုမိုလျှင်မြန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Data Transfer Rate က 5Gbps ထိရပါတယ်။
USB OTG (Universal Serial Bus On-the-Go) ကတော့ Computer မလိုပဲ OTG Support လုပ်တဲ့ Device တွေမှ တဆင့် Print ထုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။Power Saving လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Devices ရဲ့ Battery ကိုလည်း ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Window7 မှာ HDD Partition ကို မည်သည်...
Hard Disk ကို Driver Don’t Search လုပ်ထားခြင်း
G-mail ကို Offline အနေဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာတွင် အသုံ...
System Properties မှာ CPU ကို နာမည်ပြောင်း (Only W...
Subnet Masks မှာ ဖော်ပြမယ့် Number တွေပါ။ (Memoriz...
Browser တွေရဲ့ Cache တွေကိုရှင်းဖို့အတွက်
Format ချလို့မရတဲ့ USB တွေကို..................
Window 8 အတွက် ဇော်ဂျီဖောင့်အခက်အခက်ဖြစ်နေသူများ
Window 8 ကို Activated မဖြစ်သေးသူများအတွက်
Word/ Excel to PDF ပြောင်းကြမယ်
Quick Format နှင့် Regular Format ဘာကွာလဲ
ROM Drive Speed & DVD Version and Capacity
Structure of Domain Name System
E-mail တစ်စောင်ရဲ့ Network ပေါ်မှာဖြတ်သန်းသွားလာပုံ...
Dial-up Network ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံပါ။
ကဲ Network Cable တွေကို သူ့နေရာနှင့်သူ မှန်ကန်အောင...
Your Uninstaller ကောင်းကောင်းလေးပါ
Window7မှာ Genuine ပြဿနာအတွက်
Skype မှာ မြန်မာလိုမပေါ်ဘူးဆိုလို့ပါ....
WYSIWYG Web Builder v8.5.7 Portable လေးနဲ့ Website...
O&O Defrag Professional v16.0.306 Portable လေးပါ
သင့် Desktop Screen ပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိ...
မိမိဖတ်နေကျ Website တစ်ခုလုံးကို Offline မှာဖတ်လို...
Youtube မှ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ဘာSoftware မှမသုံ...
Portable Wifi Hotspot ကောင်းကောင်းလေးပါ..
အင်္ကျီ စတောကာဒီဇိုင်းဆွဲချင်သူများအတွက်
Window8 Pro Version ကိုဒေါင်းကြမယ်
A+ ကို အခြေခံကနေလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်
OSI7Layer အကြောင်းမြန်မာလိုအသေးစိတ်
Mbps နဲ့ MBps ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိစေလို........
ကဲ... UTP Cable အကြောင်းလေးပါ...
USB Specification အကြောင်းလေ... USB 1.0, 2.0, 3.0...
Exam နဲ့ပတ်သက်ပီး ၀န်လိုင်းမှာ စာဖြေသလို မေးခွန်းေ...
အကောင်းဆုံး Bath to EXE converter လေးပါ...
Power Supply ကိုအလုပ် လုပ်မလုပ်စမ်းသပ်ခြင်း
CPU ကောင်းမကောင်း Physical ဘယ်လိုစမ်းမလည်း(Desktop...
CMOS Shock တိုက်ခြင်း